Tsy tena fantatsika hoe inona no nahatonga ny fambolena sy ny hetahetan'ny taloha nandritra ny taona vitsy lasa nefa zavatra iray no azo antoka: ny flyer magazine no azo antoka fa ny porofom-piainan'io fisehoan-javatra io. Ny tonian-dahatsoratry ny magazine High Times tamin'izany fotoana izany, Steve Bloom, dia nandre ny momba ilay hevitra talohan'izay, nandritra ny fampisehoana Grateful Dead, rehefa nanolotra taratasy kely kely mitondra ny lohateny hoe "Cannabis.
Ny fehezan-kevitra dia mamintina toro-hevitra momba ny cannabis mifoka ao amin'ny 16h20 ary mitarika anao any amin'ny toerana izay ankalazaina ny daty ofisialy ho an'ny mpamafy.
Fotoana fohy taorian'ny namoahana ny fandikàn'ity bokikely ity tao amin'ny , dia nanomboka niseho na aiza na aiza ny hevitra: baseball caps, shirts and stickers. Ny hetsika rongony marobe voalohany tamin'ny 20 aprily dia niseho tany San Francisco tamin'ny tapaky ny taona 90 ary nokarakarain'ny vondrona ara-dalàna an'ny Cannabis Action Network. Ireo hetsika ireo dia niely nanerana an'i Etazonia tamin'ny taona ho avy, ary avy eo tany amin'ireo tanàna lehibe hafa manerantany.
Ao amin'ny ankamaroan'ny firenena manerantany, manam-paharetana ny polisy ary heverina ho fahitana tsy fahita firy amin'ny fisehoan-javatra toy izany ny fisamborana. Ny fitakiana eken'ny besinimaro, izay noraisin'ny gazety rongony malaza High Times, dia ny teraka tamin'ny tamin'ny vondrona mpianatra avy amin'ny Oniversite San Rafael any California, izay nihaona isan'andro tamin'ny maraina mba hifoka. Rehefa mandeha ny fotoana, ny andianteny "" dia lasa anarana kaody ho an'ny tombo-kase isan'andro. Vakio ihany koa: The Waldos. Raha mampitombo ny 12 amin'ny 35 ianao dia hahazo Toy ny lohahevitra fady, misy angano an-tanan-dehibe momba ny dikan'ny Ireto misy vitsivitsy:.
Toy ny andro maro hafa amin'ny fankalazana, ny dia lasa fotoana iray hanandraman'ireo kapitalista maharitra hitady vola. Noho izany, orinasa maro no manolotra karazana fampiroboroboana varotra rehetra.
Notaterina sy notaterin'ny angano hip-hop Fab 5 Freddy, Grè dia Greener manadihady ny fifandraisana misy eo amin'ny ahitra, mozika, fitsarana ara-tsosialy ary tsy fahamarinana mandritra ny tantara any Amerika. Zahao ny ady amin'ny zava-mahadomelina izay manjaka amin'ny tsy rariny ara-poko. Ny manam-pahaizana dia mijery ny fifandraisana sarotra amin'i Amerika amin'ny tsimparifary. Ny tantara an-tsary Hip-hop Fab 5 Freddy dia mitarika sy mitantara an'ity fanadihadiana ity izay anisany mpilalao Snoop Dogg, Cypress Hill's B-Real, DMC, Killer Mike, Chuck D ary Damian Marley izay isan'ny tena mitarika amin'ny tontolon'ny rongony.
Lehiben'ny fampielezam-baovao sy ny serasera amin'ny serasera manokana momba ny rongony ara-dalàna. Ny didim-pitondrana anaovana ny famindram-pahefana dia sady ampitaina mankany aminny solotenam-panjakana no mankany aminny Tonia mpampanao ao aminny fitsarana ambaratonga voalohany mahefa misy ilay kaominina voakasikizany.
Ireo mpiasanny kaominina amindram-pahefana mba handray ireo fanambarana , handrafitra an-tsoratra, hanoratra aminny boky sy hanao filazana an-tsisiny aminireo sora-piankohonana voalazanity andininy ity, dia manome ara-dalna ho anizay olona mila izany, ireo kopia sy vontoatinny sora-piankohonana ary fanamarinam-piankohonana rehetra na inona na inona karazany, ka eo ambany fanarahamaso sy andraikitry ny Benny tanna izany.
Ny fanaovana lavo-tondro dia tsy azo anaovana fanamarinana eo anatrehanny lalna. Na izany aza anefa, dia azonny Benny tanna na ny lefitra atao ny manamarina fa teo anatrehany tokoa no nanaovana izany. Ny Sonia vita sora-tnana omenireo mpitsara monisipaly eo ampanatontosana ny asa ara- pitondrana ataony dia manan-kery aminny toejavatra sy fotoana rehetra ka tsy ilaina fanamarinana eo anatrehanny lalna raha tahiny izy ireny miaraka aminny fitomboky ny Lapanny tanna misy kasem-panjakana. hamoaka, aminny alalnny didim-pitondrana, ireo fepetra ampiharina eo an-toerana mikasika ireo anton-javatra ankininny lalna aminy ny fanaovana andri-maso azy sady ananany fahefana rahateo; 2.
hamoaka indray ho fanta-bahoaka ireo didy aman-dalna momba ny fitandroam-pilaminana ary mampahatsiahy ny tsy maintsy hanajana azy ireny aminny mponina. Azony atao, ka misy fandoavan-tsarany voafetra araka ny tondrom-bidy efa voalamina tsara araka ny fanapahana noraisinny Filankevitra, ny manome fahazoan-dalana hijanona na hametraka vonjimaika eny aminny lalam-bahoaka, renirano, seranana sy fiantsonana amoronny ony sy eny aminireo toerana hafa falehanny besinimaro kanefa izany dia miankina aminny fahatsapana fa azo omena izany fanomezan-dlana izany raha toa ka tsy manelingelina ny lalambahoaka ny fivezivezena an-dranomasina sy aminny ony, ary ny fifamoivoizana sy fahalalahanny varotra.
Ny alalana aminny fanoritana fetran-dalana ataonny olona tsirairay, ny fahazoan-dlana hanorina, hizarazara tany sy handrava, ny fanomezan-dlana hafa momba ny fikarakarana ny lalana, dia omenny Benny tanna rehefa nanome ny heviny ireo sampan-draharahara teknika mahefa aminizany. Ny fanomezan-dlana tsy raikitra na azo esorina tsotra izao eo aminireo lalam-bahoaka, izay apetraka ho anjara raharahanny Benny tanna, ka ny zava-kendrena aminizany dia mikasika indrindra indrindra ny fametrahana ao ambaninny tany aminny lalam-bahoaka ireo fantsona atohana andalovanny rano, entona, herinaratra, na tefefaonina sy itarihana azy ireny dia azonny solontenam-panjakana omena araka ny didy navoakanny fitsarana mahefa, raha sendra ka mand tsy hanome izany ny Benny tanna kanefa tsy voaporofo tsinona izany fandavany izany fa ho tombontsoanny besinimaro.
velively ny fahefanny solon-tenam-panjakana mahefa mba handraisany, ho anny kaominina maromaro, sy aminireo toe- javatra rehetra izay tsy tonga lafatra loatra ny fanatanterahanireo tomponandraikitra monisipaly izany, izay fepetra rehetra mikasika ny fitandroam-pahasalamana, ny tokinaina sy ny fandriampahalemam-bahoaka.
Raha tandindonin-doza ny filaminana ao anatinny kaominina roa na maromaro miray sisin-tany, dia afaka misolo ny toeranny Benny tanna voakasika ny solontenam-panjakana mba hisahana, aminny alalanny didimpitondrana ombanny antonantony, ireo fahefana momba ny fitandroampilaminana voatondronity sokajy ity.
Fangatahana mifanentana - Dating Sites Spot ;
Serivisy mampiaraka maimaim-poana Mahajanga Madagaskar!
tranonkala mampiaraka ho anny akaiky anao Antananarivo Madagaskar?
Rehefa avy nakana ny hevitry ny Filankevitra, izy dia afaka mampanao ny vahoaka ireo asa ho anny tombontsoa iraisana ho fanatanterahana ny drafitrasa fampandrosona ifotony. Izy dia afaka ihany koa manome fahefana hanao sonia aminireo taranja izay tafiditra ao anatinireo raharahany.
Hanofana ireo tsy manana diplaoma ny Alamina | NewsMada.
Ny fanomezan-dlana hanao sonia na ny famindrana fahefana, dia tsy maintsy atao aminny alalanny didim-pitondrana izay mamaritra ny antony, ny faharetany sy olona nomem-pahefana. Ireo samboady ireo dia vidina aminny tetibola ny kaominina.
Aminizany, izy dia mikendry ny hisianny filaminana tsara rindra,ny tokinaina sy fandriampahalemana ary fahasalamam-bahoaka. Ho hita aminizany indrindra indrindra : 1. Izay rehetra mahakasika ny fisorohana ny loza tsy hihatra sy ny fahatsaranny fandalovana aminireo arabe, fiantsonana, kianja ary llana falehanny besinimaro, ka tafiditra ao anatinizany ny fanadiovana azy ireny, ny fanazavana aminny alalanny jiro, ny fanesorana izay rehetra manakantsakana,. ny fandrodanana ireo trano manambana ho rava na ny fanamboarana izany, ny fandrarana mba tsy hametraka zavatra eny am-baravaran-kely na faritra sasany hafa aminny trano izay mety hitera-doza ny fidabohany etsy ambany, na ny fandrarna tsy hanipitsipy zavatra izay mety hitera-pahavoazana ho anireo mpandalo na hiteraka fofon-dratsy manimba ; 2.
ny fikarakarana ny fampitsaharana izay mety hanohintohina ny fandriampahalemam- bahoaka, toy ny ady saritaka sy fifamaliana miaraka aminny savorovoro eny an-dalana, ny fisamonomononana ranitina ao aminny toerana vory vahoaka, ny fitangorongoronana arahin- tabataba, ny horakoraka sy fivorivoriana aminny andro alina ka manakorontana ny fialantsasatry ny tany ama-monina, ary izay rehetra fihetsika mety hanelingelina ny fandriampahalemam-bahoaka ; 3.
Ny fitandroana hisianny filaminana tsara aminireo toerana izay ahitana olona marobe tafavory, toy ny tsenabe na foara, tsena, koranam-pifaliana sy lanonam-bahoaka, fety fampisehoana, kilalao, trano fialana hetaheta ary ireo toerana hafa falehanny besinimaro ; 4.
ny fomba fitanterana olona maty, ny fandevenana sy famadihandrazana, ny fitandroana ny filaminana sy fahamendrehanireo vondrom-pasana ; ka tsy azo ekena mihitsy ny fanaovana fanindrahindrana manokana na fanaovana anjorom-bala manokana noho ny finoana na noho ny fivavahana narahinilay maty, na noho ny toe-javatra niseho manodidina ny fahafatesany ; 5.
ny fanaovana fisafoana mba hisy tsy tapaka ireo zavatra hamidy aminny alalanny fandanjana na fandrefesana na famrana ary ny fitandroampahasalamana mikasika anireo zava-pihinana atolotra hamidy ; 6. Ny fikatsahana izay hisorohana dieny mialoha, aminny alalnny fitandremana sahaza, sy fitadiavana izay fomba ampitsaharana aminny alalanny fitsinjarana ny famonjena, mikasika ireo loza sy atambo tahaka ny hain-trano, tondra-drano, fahavakisanny fefiloha,fihotsahanny tany na vato, ary izay rehetra loza voajanahary, areti-mandringana sy areti-mifindra aminny olona, areti-mandringana ny biby ;fanaovana haingana dia haingana izay fepetra rehetra fisorohana ny loza, fanampiana sy famonjena ary, raha misy, dia ny fanairana ny Fanjakana mba hirotsaka an-tsehatra ; 7.
Ny fikarakarana ny fandraisana vonjimaika ireo fepetra ilaina mikasika ireo olona mpirenireny sy ireo olona adala izay mety hanimba ny saimbahoaka, ny tokinaina ho anny olona na fitandroam-pananana ; 8. Ny fikatsahana fepetra mahomby na fitondram-panafana aminireo toejavatra mampalahelo mety hitranga noho ny firenireninireo biby mampi-doza na masiaka.
ny fanomanana sy fanatanterahana miaraka aminny fanampianireo sampan- draharaham-panjakana anapariaham-pitondrana voakasika, ireo asa fampandrosona novolavolainny Faritra ; 2. ny fiantohana ny fanatanterahana ny drafi-paritra momba ny fanajariana ny tany ; 3. Ny fiantohana ny fampandrosoana mirindra sy ara-drariny ireo Vondrombahoakam- paritra itsinjaram-pahefana ao anatinny fari-piadidiany, indrindra ny fanaovana laharam-pahamehana ny tombontsoa iraisanny Kaominina.
Azonny Filankevi-paritra atao ny mampiato mandrakariva ny fanomezan-dlana nataony. Ny fanapahan-kevitra noraisina ho fampiharana izany dia tsy maintsy soniavinny Lehibenny Faritra izy tenany. Miandraikitra ny fanamorana ny fanatanterahana izany izy. Izy no miantoka ny fampifandraisana ny drafim-paritra sy ny drafi-paritany momba ny fanajariana ny tany. Ny Lehibenny Faritra dia afaka mangataka fanampiana sy fanohanana avy aminny Faritany aminny fantanterahana ireo tetikasa fampandrosoana ny Faritra. Aminizany, azony atao ny mifandray aminny manam-pahefana eo anivonny firenena sy ny avy any ivelany.
Na izany aza, aminny fotoana ifamatorana aminny fifanarahana, ireo Benny tannanny Kaominina voakasika dia miara-manao sonia ny fifanarahana aminny Lehibenny Faritra. Izy dia manampy aminny famolavolana ireo fitaovana fandrafetana tetipivoarana momba ny fanajariana ny tany sy ny drafitra fampandrosoana eny anivonny Kaominina ary koa aminny fanatanterahana ireo tetikasa voarakitra anatinizany drafitra izany. Azony atao ihany koa ny manome fahefana hanao sonia aminny lafinjavatra tafiditra ao anatinny anjara andraikiny. Ny fanomezan-dlana hanao sonia na ny fanomezam-pahefana dia tsy maintsy atao aminny alalanny didim-pitondrana izay milaza mazava ny antony, ny faharetany ary ny olona nomem- pahefana.
Sokajy 3 : Ny aminny Lehibenny Faritany And. Izy no miantoka ny fampandrosoana mirindra sy ara-drariny ireo Vondrombahoakam-paritra itsinjaram-pahefana ao anatinny fari-piadidiany, indrindra ny fanaovana laharam-pahamehana ny tombontsoa iraisanny Faritra. tokony mahafantatra ny fizotra ankapobenny fampidiran-ketra sy ny fiantraikanny fampiasam-bolam-panjakana eo aminny fiainana ara-toekarena sy ara-tsosialy ao anatinny fari-piadidiany. Manome ny heviny sy toromarika izy aminizany ary manampy tosika aminny fanatrarana ireo tanjona na ireo fetrandro napetraka ; 2.
manomana sy mamolavola ny tetibolanny Faritany. raha toa ka misy fahasarotana eo aminny famatsiana ireo entam-barotra sy vokatra ara-tsakafo tena ilaina.
Izy no manangona sy manadihady ny filnny vahoaka ary manolotra ny fepetra mifandraika aminizany arakaraka ny zava-misy. Mandray ireo fepetra rehetra mahakasika ny anjara andraikitra tafiditra ao anatinny tandrifim- pahefany izy aminny alalanny fanapahana. Ny Lehibenny mpanatanteraka dia mitana rejisitra natokana ho anireo sora-draharaha alefa hanaovana fanaraha-maso ny fanarahan-dalna. Io rejisitra dia tsy maintsy voaisa ravina sy vita rango-pohinny Solontenampanjakana mahefa. Ny tsy fanatanterahana miverimberina ny fandefasana sora-draharaha any aminny Solontenam- panjakana dia raisina ho toy ny fahadisoana goavana araka izay voalaza ao aminny andininy faha anity lalana ity.
Ny Lehibenny mpanatanteraka eo aminny Vondrombahoaka voakasika no manamarina eo ambany fiadidiany ny maha-azo tanterahana ireo soradraharaha nataony. Soratana ao anaty rejistra arakaraka ny filaharanny nanaovana azy ireo sora- draharaha. Ny rafitra mpanapa-kevitra antsoina hoe Filankevitra :.
Sokajy voalohany : Ny aminny fandaminana sy ny fomba fiasa And. Tsy mahazo mihoatra ny folo andro ny faharetanny fotoam-pivoriana tsirairay. Na izany aza, ny fivoriana ho fandaniana ny teti-bola fototra dia azo itarina hatraminny dimy ambinny folo andro.
Related fotoana mampiaraka Madagaskar
Daty fanaovana daty Fianarantsoa Madagaskar
Tranonkala mampiaraka kristianina ao Madagaskar
Latin mampiaraka akaiky Tuliara Madagaskar